Akwukwo ozi nke Blog nke ihe akpadoro Indian nke "Etu" - THE INDIAN FACE
Caps na sinima
Anyị chịkọtara ụfọdụ okpu kacha mara amara na Hollywood you nwere ike ịmata ha? Soro anyị were oge sinima dị mma ebe ezigbo ndị ngagharị iwe bụ okpu!
Baseball Cap: Kedu ka ị si pụọ na uwe egwuregwu gaa bụrụ onye dị mkpa na ọdịnala obodo ukwu?
Anyị na-enye ụzọ maka akụkọ dị ukwuu n'azụ okpu baseball, a makwaara dị ka "baseball okpu" ma ọ bụ naanị "baseball okpu", ngwa nke ghọrọ egwuregwu kpochapụwo, mana isiokwu nke uwe ka dịkwa ugbu a. ugbua.
Ihe ndi eji ebu egbe. Uwe a na-ewu ewu n'oge ọkọchị
Etinyela okwu ma obu “ebu ihe” okpu ugbo ala ma gbasawanye kemgbe akuko. Na nguru ebu Ha bụ onwe ha uwe nke edobere iji chebe isi na anya na ụzarị anyanwụ, mana kemgbe ọtụtụ afọ ọ bụrụla ihe ngosi ngwa ngwa.
Ugo ugogbe anya nke nwanyi: Ngwa ndi bara uru na nke ejiji!
Ugbu a, ị nwere ike ichetụkwuo gbasara ịgbatị ahụ gị ugogbe anya maka anwụ, ndị ị hụrụ n'anya nke ukwuu ma mee ka ị yie ihe ịtụnanya na mpaghara gị niile, site na nke kachasị fashionista ọ kachasị egwuregwu.
Ngwa dị mma maka egwuregwu toro ogologo nke okirikiri .. okpu na-acha ọcha nwere ike iyi ihe dịkarịsịrị mfe na anya mbụ. Ma eziokwu bụ na ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị mma iyi n'oge anwụ na ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị ga-eme egwuregwu egwuregwu nke mmasị gị.
EGO 8D MUSIC: Gini bu egwu egwu egwu 8D kedu ihe ị ga - eji malite ige ya?
Ọ bụrụ na ịnụbeghị banyere egwu egwu 8D ma ọ bụ egwu 8, post a ga-eme ka ị gbapụ. Ọ bụ ụdị egwu a na-eme na mgbanwe nke teknụzụ dị ezigbo jụụ ma ga-eme ka ị nwee mmetụta nke ị na-ahụbeghị na abụ mbụ.
Ndi umunwanyi mụta ijiko onu ogugu gi!
Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-eche na okpu bụ naanị ụmụ nwoke na ndị egwuregwu ... Ihe ọjọọ! Nke bụ eziokwu bụ na okpu bụ ngwa bara uru na ụdị ejiji dị mkpa nke nwanyị ọ bụla kwesịrị itinye n'ime uwe ya, ọkachasị ugbu a na 2020 na egwuregwu egwuregwu na-ewe ogologo oge.
Fdị mfe nke oghere ga-eme ihe ọ bụla uwe ma ọ bụ uwe pụrụ iche n’ụzọ pụrụ iche ma ọ bụrụ na ị na-eme ya n’ụzọ ziri ezi. Yabụ na ọ bụ oge ijikọ ọnụ nke ụmụ nwanyị gị! Ekwekwala n’iru n'uzo ohuru na ngwa a nke na adighi adighi nma.
Ugogbe anya maka anwụ: Otu iko abụọ ezughị
Anwụ na-acha anwụ anwụ bụ enweghị mgbagha kachasị mma. Ha na osimiri, ebe igwu mmiri, rigo, igwe ocha, ugwu, egwuregwu na ihe ndi ozo ... Ubochi nke anwu bu ihe ojoo! Mana eziokwu bụ na ihu igwe abụghị otu ụbọchị kwa ụbọchị ọ dịchaghị mkpa ịdabere n’ụbọchị anwụ na-acha iji nwee ọ itụ ya.
Naanị lee anya na ngwa ọdịnala dị iche na ekwentị anyị, ịmara na enwere ụbọchị na-aga ngwa ngwa site na anwụ na-acha ka igwe ojii. Mana ọ dị mkpa icheta na na igwe ojii ma ụbọchị anwụ dị mkpa iji ya gafas de sol iji kpuchido anya gị nke ọma wee mezuo acuity visual dị mkpa.
Iji ugogbe anya maka anwụ - - ga-amata otu esi ahọ nke ọma
Ikike ugogbe anya maka anwụ bụ ikekwe ngwa kachasị mma nke mmadụ kere kemgbe ụwa. Nke mbụ maka nchedo dị mkpa ha na-enye anya anyị na mgbe ahụ maka ụdị mmetụta ahụ nke ihe ịrụ ụka na-adịghị mgbakwunye na uwe anyị.
Nkịta na ugogbe anya maka anwụ
Nwere ike 04, 2020
Nkịta maka ure ugogbe anya maka Doglasses - Ma ọ bụ na Anaghị Akpacha nkịta ugogbe anya maka anwụ? Nkịta nwere ike iyi iko, snịịka na ihe ọ bụla ha chọrọ, karịa ga-efu efu !!
Nwamba nwere iko
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ anụ ụlọ na ugogbe anya maka anwụ ma na-elele nwamba nwere ikoỌ nwere ike ọ na-erughị. Ọ bụghị mgbe niile ka ọ ga-abụ Puss na akpụkpọ ụkwụ, ọ nwekwara ike ịbụ Puss na iko. Na njedebe, mmetụ nke feline na-amasị ya oge niile, ka ọ bụ na cat cat iko?
Ihe kpatara ị ga - eji sonyere ejiji nke iko ihu abụọ
Otu ngwa eji ama ama ma ama, ugogbe anya maka anwụ bụ mgbakwunye nke na-agaghị apụ apụ. Ọ bụ ya mere ihe eji agbanwe agbanwe na-agbanwe ka oge na-aga. Mana dịka ị maara, ihe niile na-alaghachi, na iko gbara okirikiri enweghị ndị dị iche.
Yabụ taa, n'ime The Indian Face, anyị ewetara gị ihe ndị ịchọrọ iji mechaa kwenye onwe gị ma sonyere ụdị a.
Ntụziaka ịhọrọ ugogbe anya maka anwụ nke kachasị gị mma
Anyị nwere obere onye nduzi nke nwere ike inyere gị aka n’ezie, ọ naghị agha agha, mana ọ ga - eme ka ihe dịrị gị mfe mgbe ị na - ahọrọ otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ. N'ime ntuziaka a, anyị ga-egosi gị ugogbe anya maka anwụ nke kachasị gị mma
Igodo ịhọrọ ugogbe anya maka anwụ maka ịhapụ
Na Christmas anyị niile chọrọ inweta onyinye ahụ zuru oke, ọtụtụ oge adịghịkwa mfe. Yabụ na The Indian Face anyị chọrọ inyere gị aka site n'inye gị igodo ịhọrọ iko zuru oke dabere na njirimara gị, nke mere na mgbe ị nyere ha onye ahụ pụrụ iche (ma ọ bụ onwe gị) ị ga-atụ ihe ijuanya.
Jiri batrị malite cha cha nke ọma na ezigbo elele gị na ugogbe anya maka anwụ polarhoist nke The Indian Face
You bụ otu n'ime ndị na-akpọ asị ịlaghachi usoro ihe omume karịa ihe niile? Onweghị ihe ọ bụla na-akpasu iwe karịa ịkpọte gị na ụda jọgburu onwe ya nke elekere mkpu. You na-enwe ike ịnweta nri ụtụtụ ị na-achọ ịga n'oké osimiri? Anyị na-enye gị ọtụtụ aghụghọ iji were ọ joyụ buru ọkwa a!
Ugogbe anya maka anwụ na telivishọn: 7 protagonist nke usoro gosipụtara oge ha na
Ugogbe anya maka anwụ bụ mgbakwunye enyerela aka ịmepụta ụdị nke ọtụtụ ndị akụkọ ifo. Ọ bụrụ na na gara aga post anyị anakọtara ugogbe anya maka ugogbe anya n’ile anya na cinemaTaa anyị na-eme ya na ndị nke butere etiti etiti na usoro telivishọn kachasị amasị gị.
Jiri ugogbe -esi anwụ anwụ mee usoro gị polarObodo Urban na-efegasi The Indian Face
Tick-tock, sax-tock, sax-tock ... Nlaghachi na usoro a na-abịaru nso! Ugbu a ị nwechara batrị ahụ ọfụma, kedu ihe karịa ịtụgharị uche na ọnọdụ ndị na-abịa n'ihu oge ọhụrụ?
Igwe ugogbe anya polarkegidere Freeride Spirit, mgbakwunye zuru oke maka mmụọ efu dị ka gị
You bụ otu n’ime ndị na-emefu izu ahụ dum ịhazi atụmatụ ị ga-enweta mgbe izu ụka ga-abịa? Ọ na-amasị gị iyi uwe elu obodo ebe ị na-aga? Ver ji ama egwuregwu na ndụ ike? N'okwu ahụ, anyị nwere ihe maka gị!
Ndụmọdụ bara uru: otu esi ahọpụta ugogbe anya maka anwụ dị ka ụdị ihu gị yana njirimara gị
You chọrọ ịzụta ugogbe anya maka anwụ ọhụrụ, mana enweghị ike ịchọta ụdị kachasị mma ị nwere? Don'tghọtaghi ihe kpatara oke ugwu a mara mma ji amasị gị ntakịrị? You chọrọ ịchọta atụmatụ nke na-eme ka njirimara gị dịkwuo elu ma na-agbakwunye mmetụ nke ịma mma ị na-achọ? Ọ dị mfe karịa ka ị chere. Anyị ga-egosi gị ya!
1 2 Ọzọ